HomeTURKEYGobolka Waqooyi Bari25 Erzurum ReviewPalandöken Festival wuxuu u qulqulayaa meelaha gala hiwaayadda ciyaaraha
13 / 01 / 2020 25 Erzurum Review, Gobolka Waqooyi Bari, GUUD, TURKEY, TELPHER
xafladda palandoken waxay soo jiidataa taageerayaasha isboorti
Bandhigga Palandöken, oo ay soo qabanqaabisay dowladda hoose ee magaalada Erzurum ee ku taal bartamaha magaalada Palandöken Ski Center, ayaa waxaa buux dhaafiyay taageerayaal isboorti.
Dulmiga barafka, farsamada barafka, farshaxannada barafka iyo hawlo kale oo fara badan oo ku saabsan qiimaynta xafladda, oo ay ku jiraan Duqa Magaalada Erzurum Metropolitan Munhmet Sekmen, "hawlo midabyo kala duwan leh oo ay ka buuxaan midba midka kale oo leh dabaaldeg dalxiis jiilaalka iyo cayaaraha jiilaalka ee dabaysha," ayuu yidhi. 5-10 Hadday dhahaan in tartanka barafka ama buuraha lagu qaban doono Palandöken ilaa XNUMX-XNUMX sano ka hor, qofna ma rumeysan karo Sababta oo ah marka ay timaado Palandöken, barafka waxaa maskaxda lagu hayaa wakhtigaas, Başkan wuxuu yiri Madaxweyne Sekmen.
Pal Waxaan aqoonsi iyo tayo noocan ah u helnay Palandöken 6dii sano ee ugu dambeysay tan iyo markii aan xafiiska la wareegey; Markay tahay Palandöken, xitaa isha ilaha adrenaline waxay bilaabeen inay maskaxda ku hayaan. Sababtoo ah waxaan u keenay aragti cusub dalxiis jiilaalka Erzurum; Kaliya kuma koobno ​​dalxiiska jiilaalka xadidan ee barafka laakiin waxaan sidoo kale la dhexgelinay isboorti jiilaalka. Xaqiiqdii, annaga oo la kaashanna hay’adaha qaranka iyo kuwa caalamiga ah ee aan ku qaabilno Erzurum, waxaan abuurnaa wacyigelin guud oo ku saabsan Palandöken iyo Erzurum Sababta oo ah waxa ugu weyn ee dalxiisku waa soo jiidasho iyo ammaanaan ayaa leh Palandöken. Deegaan Palandöken waxaa ka jira fursado loogu talagalay dabeecadda iyo isboortiga adrenaline, waxaanan ku soo bandhigi doonnaa kartaan haddii Alle idmo. In kasta oo ujeeddada '1 milyan oo dalxiisayaal' ah lagu hor dhigayo Erzurum; waxaan qiimeyneynaa awoodahan. Waxaan sii wadi in uu horay u la talaabooyin adag goolka this dhaqaaqo. "Dhanka kale, climbers xirfadeed, ka dhisay Palandöken Ski iyo Turkey ayaa derbiga fuulitaanka baraf aan dabiici ahayn marka hore muhiim ah ka sameeyey Park Ice ah.
Isboorti, adrenaline, madadaalo ku leh Snowplus Palandoken Ski Center
Tababaraha Isboortiga Festiwaalka Palandoken Winter ayaa la bilaabay
Tababaraha Isboortiga Festaalka Palandöken
Sannadka Cusub ee Ciidul Fidinta ee Dalxiiska Palandoken Ski
Raadiyaha Dalxiiska ee Palandoken Ski Resort
Horyaalka Skiing ee Palandöken Mountain
Tartanka baaskiilka ee barafka Palandöken
Fuulo baraf gacmeed